Izindaba - Ama-valve wesistimu ephezulu ye-hydrogenation
Ubuchwepheshe be-Hydrogenation be-petroleum inqubo ebalulekile emikhiqizweni kaphethiloli, ekulungisweni nasekucutshungulweni okusindayo kukawoyela. Akugcini nje ukuthuthukisa ukujula kwenqubo yesibili kawoyela ongahluziwe nezinga lokutholwa kwe-hydrocarbon elula, kepha futhi kukhulisa ikhwalithi kawoyela kaphethiloli futhi kunciphise ukungcoliswa kwemvelo. Ngakho-ke, ukwelashwa kwe-hydro, ukuqhekeka kwe-hydro noma i-Residue hydro treatment kanye nolunye uhlelo lwe-hydrogenation sekuyinto ebalulekile yunithi yokucwenga. IHydrogenation Unit isengozini yomlilo ekilasini A, izici zayo ezinkulu zobuchwepheshe ukushisa okuphezulu, umfutho ophakeme, ukuguqulwa kwe-hydrogen. Ama-valve e-Hydrogenation aphezulu: ubuchwepheshe obuphezulu, izidingo zekhwalithi eqinile, ukuphepha nokwethenjelwa.
Amaphayiphu we-hydrogenation yengcindezi ephezulu anezici ezilandelayo, ngaphezu kwemisebenzi yama-valve avamile:
Kuqeda ukukhishwa okubalekayo kwaphakathi ukuze kusebenze ukusebenza kwe-valve, uhlobo lokuxhuma lomzimba nesiqu kufakwa ingcindezi evaliwe, futhi ibhonethi, indandatho yokubeka uphawu nendandatho enezinto ezine, njll kubalwa ngokuphelele ngokuya nge-EN 12516-2 kuya gwema ukuvuza.
Umzimba unokuhlaziywa kwengcindezi ngaphansi kwesigaba sokusebenza nesoftware yokuhlaziya ye-ANSYS, futhi ekhoneni lendawo yengcindezi kwenziwa ukuhlaziywa kwengcindezi kwefilimu ukuqinisekisa ukushuba komzimba, ukuze kugwenywe ukuvuza kwangaphakathi.
Ukupakisha kuyi-graphite emsulwa (okuqukethwe okumsulwa kwekhabhoni ≥95%) nokugqagqana kwendandatho yensimbi engagqwali eboshwe evela e-US GARLOCK Company. Ubuningi bendandatho ye-graphite esivele yakhiwa ingu-1120kg / m3. Futhi konke ukupakisha kuqukethe i-corrosion inhibitor. Okuqukethwe kwekhono lokuhlunga i-chloride ngu- <100ppm okuqukethe okunamathisela, okokuthambisa nezinye izithasiselo, ukuze kugwenywe ukubola kwesiqu yi-CI nokukhishwa kombaleki kwaphakathi.
Inqubo yokusakaza yezingxenye zengcindezi isisekelo senqubo yokulingisa yokuhlola ukuhambisana, ene-100% yokuhlola okungonakalisi. Umkhiqizo osuphelile we-castings uhambelana nezidingo zamazinga aphezulu we-high-pressure kanye ne-high-pressure hydrogenation valve; Imishini kanye nomhlangano kuphoqelelwa ukuthi kusebenze ukucubungula nenqubo yomhlangano.
Usayizi 2 ”~ 24”
Isilinganiso Isigaba 600 ~ Isigaba 2500
Umklamo ojwayelekile I-API 600, i-API 6D, i-BS 1873, i-ASME B16.34
Ukuhlolwa nokuhlolwa I-API 598, i-API 6D, i-ISO 5208, i-ISO 14313, i-BS 5146
Izinto Zomzimba Carbon Steel, Insimbi Engagqwali, Ingxubevange Steel, Duplex Steel
Ukusebenza Hand isondo, Gear, Motor, womoya
Qaphela: Ubukhulu be-valve ye-serial flange yokuxhuma i-flange ingadizayinwa ngokuya ngemfuneko yamakhasimende.